2-qof oo ku dhimatay dagaal shalay kadhacay deegaanka Balanbal ee gobolka Galguduud iyo xaaladda deegaanka oo saakay dagan – Radio Daljir
Agoosto 8, 2012 1:54 b 0
Balambale, Aug 08 – Wararka ka imaanaya degmada Balanbale ee gobolka Gadgaduud ayaa ku waramaya in laba qof ay ku geeriyoodeen dagaallo laba maleeshiyo beeleed ku dhexmaray shalay galab deegaanka Qaylowayne oo hoostimaada degmada Balanbal.
Dagaalka ayaa yimid, kadib markii mid ka mid ah maleeshiyaadka? dagaalamay oo kasoo jeedda degmada Guriceel ay jareen dhirta qoyan ee deegaankaasi, si’ay? uga shidaan dhuxul, taasi ayaa dhalisay is-maan dhaaf oo markii dambe? isu badalay dagaal labada dhinac deegaanka ku dhexmaray saacado kooban, inkastoo markii dambe xaaladdu ay iska qabowday iyadoo aan wax waan-waan ah laga dhexsamayn dhinacyada dagaalamay.
Dad deegaanka ah oo la hadlay idaacadda Daljir ayaa sheegay xaaladdu inay saakay dagantahay ayna socdaal dadaallo labadeed oo? lagu baajinayo dagaalka oo ay wadaan odayaasha dhaqanka.